No. 2084, Thursday, March 14, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2084, Thursday, March 14, 2019
No. 2084, Thursday, March 14, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၉ ရက် (ကြာသပတေး၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉)
Blue Moon အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ လစာမရသည့်ကိစ္စ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ညှိနှိုင်းပေး
လုပ်သား ၇၀၀ ကျော် ကို လစာ ကျပ်သိန်း ၁,၅၀၀ ခန့် ပေးချေရန်ပျက်ကွက်သည့် Blue Moon အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ စက် ပစ္စည်းများရောင်းချပြီး ရရှိသည့် ငွေဖြင့် အလုပ်သမားများအား လစာနှင့်နစ်နာကြေးများပေးချေ ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက တိုင်းအစိုးရရုံး၌ မတ်လ ၁၃ ရက် တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးခဲ့ သည်။
ပြည်ထောင်စုကြီးခိုင်မာရေး ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများက ကူညီမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ပြည်ထောင်စုကြီး ခိုင်မာရေးအတွက် ပအိုဝ်းတိုင်း ရင်းသားများက ကူညီမည်ဟု တ ထစ်ချယုံကြည်ကြောင်းနှင့် ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယများဖြင့် ဆောင်ရွက် သွားပါက ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင် မုချရောက်မည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီအတွက် စတေးရသူများ ထပ်မရှိစေရေး ကြိုးစားကြရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္က သိုလ်၌ မတ်လ ၁၃ ရက်က ကျင်းပသည့် ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင် ကျဆုံးခြင်း (၃၁)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် သဝဏ်လွှာပေးပို့ သည်။
သာသနာ့အလံ မလျော်မကန်အသုံးပြုမှုတားမြစ်ပေးရန် ဆရာတော်များထံ သာသနာရေးဝန်ကြီးတောင်းဆို
သာသနာ့အလံကို နိုင် ငံရေးဆန္ဒပြပွဲများ၌ အသုံးပြုခြင်းအပါအ၀င် မလျော်မကန်အသုံးပြု မှုများအပေါ် တားမြစ်မှုမရှိဖြစ်နေပြီး သတ်မှတ် ချက်နှင့်အညီသုံးစွဲရေး ကြီးကြပ်ရန် သံဃာ့အဖွဲ့ အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ ညွှန်ကြားသင့်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက မဟန ဆရာတော်များထံ လျှောက်ထားသည်။
ရန်းနက်စ်နှင့်ပွဲ၌ အာဆင်နယ်တွင် လာကာဇက်ပါဝင်နိုင်မည်
အာဆင်နယ်အသင်း တိုက်စစ်မှူး လာကာဇက်၏သုံးပွဲ ပယ်ပြစ်ဒဏ်ကို နှစ်ပွဲပယ်အဖြစ် လျှော့ချခဲ့ပြီးနောက် လာကာဇက် သည် ယနေ့ည ယူရိုပါလိဂ် (၁၆) သင်းအဆင့် ရန်းနက်စ်နှင့်ဒုတိယ အကျော့ပွဲစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည် ဟု ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (UEFA) က ပြောသည်။
ဖီးလ်ဖိုဒန် မန်စီးတီးအသင်း၏ အသက်အငယ်ဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်လာ
မန်စီးတီးက ရှော်လ်ကေးကို ခုနစ်ဂိုးသွင်းယူပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်သို့ ချီတက်ခဲ့ သောပွဲစဉ်တွင် မန်စီးတီးကစား သမား ဖီးလ်ဖိုဒန်သည် မန်စီးတီး အသင်း၏ အသက်အငယ်ဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်လာ သည်။
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရေး တပ်မတော်၊ RCSS နှင့် SSPP တို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမည်
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသများ၌ ဖြစ်ပွား နေသောတိုက်ပွဲများ လျှော့ချရေး တပ်မတော်၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS) နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)တို့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် တပ်မတော်နှင့်RCSS တို့ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်မှ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရမည်ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြု
အသက်ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နှင့် လက်ထပ်ပါက ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုဖြစ် နိုင်သောကြောင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏လက်ထပ်ထိမ်း မြားနိုင်သည့်အသက်ကို ‘၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်ရမည်’ ဟု အမျိုးသား လွှတ်တော်က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကာ အတည်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသော မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး နှိပ်စက်ခံနေရသည့် ရုပ်သံဖိုင်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူ ကုန်ကူးခံရသော မြန်မာအမျိုး သမီးတစ်ဦး နှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခံ နေရသည့် ရုပ်သံဖိုင်ကို လူကုန်ကူး မှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ က ထုတ်ဖော်ပြသကာ တရုတ် နိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ် ကိုင်လိုသူများအား သတိပေး သည်။
နိုဝင်ဘာတွင် ၁၄ ရက် ကြာ ကောက်ယူမည့် ကြားဖြတ် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းအ တွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် လုပ် ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေ သည်။
ရန်ကုန်မြို့ မိလ္လာစနစ်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးတွင် လျှပ်စစ်မီးတိုးပေးနိုင်ရေး JICA မှ ယန်း ဘီလီယံ ၈၀ ကျော် ချေးမည်
ရန်ကုန်မြို့ မိလ္လာ စနစ် ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့များ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ဖြန့်ဖြူးမှု ကောင်းမွန်စေရေး ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA)မှ ဂျပန်ယန်း ဘီလီယံ ၈၀ (ကျပ်ငွေဘီလီယံ၁,၀၀၀ကျော်) ကျော်ချေးယူမည်ဟု လွှတ်ေ
ဖြိုးလေးရဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ်မှာ သီချင်းနှစ်ပုဒ် ၀င်ဆိုပေးတဲ့နေ၀င်း
Snare အဖွဲ့အနေဖြင့် ယခင်က ရပ်တည်ခဲ့သော်လည်း သူငယ်ချင်းများစုပေါင်း၍ တိုင် ပင်ကာတစ်ကိုယ်တော်အခွေသီး သန့်စီထွက်ရှိခြင်းဖြစ်ပြီးနောက် ပိုင်းတွင်လည်း Snare အနေဖြင့် သီချင်းများ ဆက်လက်ဖန်တီးမည် ဟု အဆိုတော်နေ၀င်းကပြော သည်။
မို့မို့မြင့်အောင်ငယ်ဘဝသရုပ်ဆောင်မှုအတွက် ပရိသတ်တုံ့ပြန်မှုကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
‘လှပ်၍ လွင့်သော’ ရုပ်ရှင်တွင် မို့မို့မြင့်အောင်၏ငယ်ဘဝ ကို သရုပ်ဆောင်ရသဖြင့် တာဝန်ကြီးသလို ယင်းဇာတ်ရုပ်အပေါ် ပရိသတ်များ၏ တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်း ခင်ဝင့်ဝါ က ပြောသည်။
စံချိန်တူသွင်းဂိုးများဖြင့် ကွာတားတက်နိုင်ပြီးနောက် အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကကို မန်စီးတီးနည်းပြချီးကျူး
ရှော်လ်ကေးကို ခုနစ်ဂိုးပြတ်ဖြင့် နိုင်ကာချန်ပီယံ လိဂ်ကွာတားသို့ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ ပြီးနောက် မန်စီးတီးနည်းပြဂွာဒီယို လာက ကွာတားအဆင့်သို့ အင်္ဂ လန် သုံးသင်းတက်ရောက်နိုင် ပြီးဖြစ်၍ ယင်းမှာ အင်္ဂလန်ဘော လုံးလောကအတွက် မယုံနိုင်စရာ ကောင်းမွန်သည်ဟု ချီးကျူးပြော ကြားသည်။
ရှမ်းအသင်းနှင့် နည်းပြချုပ် ဦးမင်းသူ နှစ်ဖက်သဘောတူ လမ်းခွဲ
မြန်မာလိဂ်ကလပ် ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်း နည်းပြချုပ်ဦးမင်းသူသည် အသင်းနှင့် နှစ် ဖက်သဘောတူ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း အသင်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကိစ္စ သဘောတူညီချက်များ တင်ပြရန် ကယားပြည်နယ်အစိုးရထုတ်ပြန်
ကယားပြည်နယ်အစိုး ရအဖွဲ့က ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူဆွေး နွေးချက်များ တင်ပြရန်စာထုတ် ပြန်သော်လည်း ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ် သက်၍ သဘောတူညီချက်ပျက် ပြယ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ် တုပြောင်းရွှေ့ရေးကိုသာ အစိုးရ က တာဝန်ယူရန်ကရင်နီပြည်လူ ငယ်အင်အားစုက ယမန်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေသော ကျောက်တော်ဒေသခံနှစ်ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး နှစ်ဦးကျန်
တပ်မတော်နှင့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် မတ ရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ ၁၇ (၁) (၂) ဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်း ဆီးစစ်ဆေးနေသော ကျောက် တော်မြို့နယ်မှ ဒေသခံလေးဦးအ နက် နှစ်ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ သည်။
စစ်တွေသို့ပို့မည့် ကျပ်သိန်း သုံးသောင်းခန့်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ တောင်ငူတွင် စံချိန်တင် ဖမ်းမိ
စစ်တွေသို့ ပို့ဆောင်မည့် ကျပ်သိန်းသုံးသောင်းခန့်ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို တောင်ငူ (၄)မိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယမန်နေ့ နံနက်က ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း တောင်ငူမြို့နယ်ရဲမှူး ရဲမှူးမြင့်ဝင်းက ပြောသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျဆုံးခဲ့သော အမေရိကန်စစ်သည်ရုပ်ကြွင်းများကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အ တွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျဆုံးခဲ့သော အမေရိကန်စစ်သည်များအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ကြွင်းများကို ရှာဖွေကာ ပထမ ဆုံးပြန်လည်သယ်ဆောင်သည့် အခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၂ ရက် က မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အပါအ၀င်သုံးဦးကို သခင်စစ်ကုမ္ပဏီက အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲ
မြစ်ကြီးနားသတင်းဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ချုပ်နှောင်အနိုင့်ကျင့်ခြင်း ကြောင့် ပုဒ်မငါးခုဖြင့် ၀ိုင်းမော်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ခံခဲ့ရသည့်သခင်စစ် သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီက မြစ်ကြီးနားဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဘရန်မိုင် အပါအ၀င် သုံးဦးကို အသရေဖျက်မှုပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း တရားစွဲခံရသူ ဦးဘရန်မိုင်ကပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကျွဲ၊ နွား တရားဝင်တင်ပို့ရေး ဝန်ကြီးဌာနများ ညှိနှိုင်းနေ
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကျွဲ၊ နွားတရားဝင်တင်ပို့ရောင်းချရေး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ ညှိ နှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်က ပြော ကြားသည်။
ပန်းဆေးဒေသရှိ ခိုလုံလီရှော တိုင်းရင်းသားများ ဖမ်းဆီးခံရမှုအပေါ် ရှင်းလင်း
တအာင်းလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့(TNLA)က ပန်းဆေးဒေ သရှိ ခိုလုံလီရှောတိုင်းရင်းသား များကို ဖမ်းဆီးကာ ငွေဖြင့် ပြန် လည်ရွေးခိုင်းနေ၍ ဒေသခံ ၂၀ ခန့်က မန္တလေးမြို့တွင် မတ်လ ၁၃ ရက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာရန် နှစ်ရှည်မြေငှားရမ်းခွင့် အထူးအခွင့်အရေးပေးမည်ဟုဆို
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝင်ရောက်မှုမရှိသည့် ချင်းပြည် နယ်ကို အခြားတိုင်း၊ ပြည်နယ် များထက် နှစ်ရှည် မြေငှားရမ်း ခွင့် အထူးအခွင့်အရေးပေးနိုင် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကော်မရှင်က သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
သီးနှံအာမခံစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနအချို့၏ အကူအညီရရေး အခက်ကြုံနေ
သီးနှံအာမခံစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနများ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုရရှိရန် အခက်အခဲအချို့ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ဂလိုဘယ် ဝေါလ် အာမခံကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက် တာဦးစိုးဝင်းသန့်က ပြောသည်။
၁၃ နှစ်ခန့် ရပ်နားထားသည့် မကွေးလေကြောင်းခရီးစဉ် ဧပြီတွင် ပြန်လည်ပြေးဆွဲမည်
ယခုနှစ် ဧပြီလကုန်ပိုင်း ကစတင်ကာ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ တိုင်း Caravan အမျိုးအစား လေ ယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်-မကွေး-ရန်ကုန်လေကြောင်းလိုင်း ပြန်လည်ပြေး ဆွဲရန် စီစဉ်ထားကြောင်း မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ကသာ-ထီးချိုင့်လမ်းပေါ်ရှိ ပျက်စီးနေသော သစ်သားတံတားကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးရန် တင်ပြ
ကသာ-ထီးချိုင့်လမ်းပေါ်ရှိ ပြည်သာယာကျေးရွာတွင် တည် ရှိသော အလျားပေ ၂၅၀ ရှည် သည့် သစ်သားတံတားကြီးသည် အချိန်မရွေး ပြိုကျပျက်စီးနိုင်သဖြင့် အမြန်ဆုံးပြုပြင်ရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြထားကြောင်း ကသာမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီထွန်းကေ
. ဘာစီလိုနာက စပိန်နောက်ခံလူ ဂျော်ဒီအယ်လ် ဘာ (၂၉) နှစ်ကို ၂၀၂၄ ဇွန်လ ၃၀ ရက်အထိ သက် တမ်းရှိသောစာချုပ်သစ်တစ်ရပ် ချုပ်ဆိုပြီး စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ယူရိုသန်း ၅၀၀ သတ်မှတ်ထား သည်။
အက်သလက်တီကိုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သော ပွဲမျိုးအတွက် ဂျူဗင်တပ်က ရော်နယ်ဒိုအား ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ဟု အယ်လီဂရီဆို
ပထမအကျော့အက်သ လက်တီကိုကွင်းတွင် ၂-၀ ဂိုးဖြင့် ရှုံးထားသောရလဒ်ကို ပြောင်း ပြန်လှန်၍ ရော်နယ်ဒို၏ဟက်ထ ရစ်ဂိုးဖြင့် ဒုတိယအကျော့၌ အနိုင်ယူကာ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာ တားအဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ ပြီးနောက် ဂျူဗင်တပ်နည်းပြအယ် လီဂရီက မိမိတို့အသင်းသည် ယင်းကဲ့သို့သောပွဲများအတွက် ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူခြင်းဖြစ် သည်ဟု ပြောကြားသည်။
ဘတ်ဂျက်လိုငွေဖြည့်ဆည်းရန် ဗဟိုဘဏ်မှ ကျပ်ဘီလီယံ ၁,၀၀၀ ကျော် ချေးမည့်အစီအစဉ် အတည်ပြု
နိုင်ငံတော်၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ဖြည့်ဆည်းရန် ဗဟိုဘဏ်မှ ကျပ်ဘီလီယံ ၁,၀၀၀ကျော် ချေးယူမည့်အစီအစဉ်ကို မတ်လ ၁၂ ရက်က ကျင်းပသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကာ အတည်ပြုခဲ့သည်။
နှစ်လကျော်အတွင်း ရှမ်းမြောက်တွင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တစ်သောင်းကျော်ရှိလာ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလဆန်းကစ၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေသူ တစ်သောင်း ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (UNOCHA) က ယမန်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန် သည်။